Yintoni intombazana enokuyenza ibe nayo ekhabetheni layo?
Abasetyhini bazinikela ixesha elide lokwenza i-wardrobe. Makhe sithethe malunga nokuba akukho mfazi ongakwenza ngaphandle. Ziziphi izinto ezigqoka iinqwelo zowesifazane wesimhla? Abaninzi abasetyhini baphupha ngolu hlobo lwesambatho, apho kuya kubakho iintlobo zezihlangu kunye neempahla. Ukuthengwa kuyintsikelelo enhle. Maxa wambi amantombazana aya kuthenga, kwaye, ngokufanelekileyo, athenge izinto ezingadingekile.
Isalathiso somfazi wesimanje
Ngaphambi kokuba uhambe ukuthenga rhoqo, kufuneka uhlalutye i-wardrobe yakho. Ungasusa into okanye wongeze into. Kwaye kuyimfuneko ukugqiba oko ulahlekileyo.
Izinto zezo shishino
Zilungiselelwe ukuya emsebenzini. Ukuba awuqeshwanga okwangoku, kodwa ufumene umsebenzi, uya kuwufuna, naye, akunakwenzeka ukuba akuqeshe ukuba ufikelele udliwano-ndlebe kwi-jeans elula. Kodwa ukuba unxibe iseshoni shishini, uya kuba nomdla kumqeshi.
Ijacket okanye ibhatyi kufuneka igqitywe kwisitayela seklasi kwaye ibe yimizimba, ngelixa kunqweneleka ukuba umzekelo wawumthunzi omnyama.
Iigantshi ziqhelekile, eziza kufanelana nejacket ngombala. Iimodeli kufuneka zibe yinto yonke kwaye zikhangeleke kakuhle kwaye zingenayo ibhatyi.
I-skirt - ifanele ifane nesigaba sombala kwisitya, ngesitayela kwaye ibe yinto ebaluleke kakhulu kwi-wardrobe.
Iikhati kufuneka zibe nemibala emininzi. Unokuba nekhati elihle kakhulu, elinemibala kunye nemikhono emhlophe emhlophe.
Ukugqoka kufuneka kufike ngokuhlwa ngokungaqhelekanga kunye neyokusebenza.
I-Sharfiki ibonelelo eliphezulu kwi shishini. Kungcono ukuba nemibala eyahlukahlukeneyo.
Ingxowa kufuneka ifane nombala kunye nezicathulo zibe mnyama ngombala.
Iikhatyuka ngezithende. Ukuhamba komfazi kwizithende zakhe kuyabaleka, kwaye lona wesifazane ukhangelekile.
Kwiintombazana nganye, imidlalo iyiliso elihle kwaye linandipha. Abanye benza umsebenzi wokusa ngokuhamba, abanye bahamba befuna ukufaneleka. Oku kufuna iimidlalo.
I-suit suit ingaba nayiphi na imibala, kodwa ivulekile kwaye ikhululekile.
Izitya zimele zibe ngobukhulu kwaye zikhululeke.
I-t-shirts kufuneka zibe ziqhezu ezimbalwa, naluphi na umbala wemibala, kunye okanye ngaphandle kwemidwebo, kunye nemikhono emide eyahlukeneyo.
Isikhwama sezemidlalo kufuneka sihluke ngokubanzi, kufuneka sibe nento oyifunayo ukuqeqeshwa.
Xa ikhabethe lakho lidibanisa ezininzi izesekeli, i-wardrobe iyabalabala.
Ugqoke - kungcono ukuba nemifanekiso yeendlela ezahlukeneyo, ezahlukileyo kumbala obala.
Izikhwama - zanele ukuba zibe neengubo ezimbini zeeholide, zinokuba nemibala eyahlukeneyo kunye nobude obude.
Iimpuphu - zifuna ukuba neendlela ezininzi, izitayela ezahlukeneyo kunye nemibala.
Izikhwele - kungcono ukuba nekhanda eliphezulu okanye isithende esiphezulu, kodwa ukuba kukho iqela lokudansa elipholileyo, kungcono ukhethe ukhetho olulula kwaye lulula lokudansa. Le nto ingaba izicathulo kwiincinci ezincinci okanye kwi-ballet.
I-Clutch iyingxenye ebalulekileyo yintombazana. Apho uya kuqhuba ifowuni yefowuni, isicwecwe somlomo kunye nokunye.
Izixhobo zineentsimbi, izikhwama, ubucwebe beengubo, amabhande. Intombazana kufuneka ibe neyakhe imveliso, ngoncedo lwayo ungajonganisa indlela yokubonakala ngayo.
Izambatho eziqhelekileyo zokuhamba kwivenkile, ngokuhamba
I-Jeans - kungcono ukuba nezitayela ezahlukeneyo - ezichanekileyo, ezivuthayo, iipayipi ze-jeans, kufuneka zikhululeke.
Ukufudumala okufudumeleyo kufuneka kufakwe kwi-wardrobe, kuba ufuna ukukhusela impilo yakho, ngenxa yokuba ubusika bunzima kakhulu.
Iingubo, iikhati, iibhola, iebhatyi-kufuneka zibe kwisigubho saloo mabhinqa ahlukahlukeneyo imibala kunye nezitayela.
Ixesha lohlobo lokuphumla
Eli lixesha elihle lonyaka. Kwaye kufuneka kuthethwe ngenyameko ekhethekileyo.
I-Swimsuit ifanele ihlale kakuhle kumfanekiso, ifihle impazamo kwaye igxininise isidima.
Izihlunu, izilwanyana. Kwiqela lasehlotyeni kukungcono ukuhamba ngezicathulo, kunye nolo lwamanxwemeni kwii-slates.
Izixhobo - iingxowa, iiglasi, ii-capes, iikhoti, njl. Izambatho kwiidrobhe kufuneka zibe zihlukeneyo, ziqhakazile kwaye zizaliswe.
Izambatho zimele zibonakalise isimo somphefumlo wakho. Kwaye ukuba uhlale unemihlali enkulu, kufuneka udibanise i-wardrobe yakho. Makungabikho izinto ezininzi, kodwa ziya kuba nemibala eyahlukileyo, izitayela kunye nezitayela.
Indlela yokukhetha iingubo zesikhumba seminki: iingcebiso ezincedo
Indlela yokubopha ityiti
Ukuqokelela kwebusika kwiClub Monaco: ezisebenzayo, ezanamhlanje, ezintle
Yintoni enxibayo ibhattshana elifutshane?
Isalathiso samantombazana apheleleyo
Sihlambulula ingubo yoboya ekhaya: njani ukuhlambulula ingubo yesikhumba seminki
Imbali yokudalwa kwe-brand Adidas
Iingcebiso zokuthatha uvavanyo lwebisi lwebele
Indlela yokuququzelela inxaxheba kwindlela yaseJapan
ULev Durov: Ubomi kunye noBomi bomntu
Ukuxhatshazwa kweSikolo: ngubani omele uxanduva kunye nento yokwenza?
IHososcope ngoJanuwari: ama-Aries
Eyona nto imnandi kakhulu kwiKhisimusi 2018
NjengeNdlovukazi: ukuthengiswa kwe-Krismasi yokuqokelela ubusika kweReiss
Indlela yokukhulisa iinwele ezinempilo kunye nezinwele
Ubukhwele besilisa nabesifazane
Indlela yokuphilisa umfutho wexinzelelo kwiindlela zokulungisa izilwanyana
Umtshato wabantu: inzuzo kunye neengxaki
Ukuhlaziywa kwesibhakabhaka nge plasmolift
Kish ngamakhowe kunye neetamatisi
Ukupheka i-zucchini ebusika